Yikhulu ukusuka eMoscow, ku osebeni Nara, ngilungele confluence eMfuleni Oka, welula i sezindela sasendulo, okuyinto uyazisile Serpukhov. Owesilisa Vysotsky sezindela isibusiso Sergiya Radonezhskogo e 1374 wasungula Brave Prince uVladimir - isihlobo naseduze ka Dimitriya Donskogo. Abode imele entabeni, ube uzungezwe abantu amahlathi okusezingeni eliphezulu futhi obukhulu.
Vysotsky Monastery - akuyona into nje ukuthi limnandi leli dolobha elincane. Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala ke ingatholakala lemakhono ekukwati kufundza nekubhala esingokomoya sabangu-Ivan Kalita, eziphathelene 1339. Yakhiwa kwemingcele Oka njengoba inqaba phakathi nezingxoxo ezinde amaMongol-Tatar bahlaseli, futhi kamuva - isibe isithiyo abahlaseli Polish, edolobheni Sekuyisikhathi eside kubhekwe eliqaphile of ubukhulu of eMoscow.
Serpukhov idume nomlando wayo:-ke kwenziwa ukuhlolwa amabutho, u-Ivan IV, futhi Boris Godunov, emashalofini eqoqwe Vasiliy Shuysky futhi umholi ongumlimi Ivan Bolotnikov.
Namuhla, kunamabandla sezindela Orthodox Episcopal esigodlweni futhi lombhishobhi behlonipha St Nicholas White namathempeli amaningi. Kukhona futhi kuphela ezweni lethu ngokuyisimangaliso "ongashi chalice". Serpukhov ngonyaka uthola zezihambeli nabantu abeza ukuphulukisa isithonjana zabo kusuka ezihlukahlukene izifo futhi "nosizi", kuhlanganise umlutha wotshwala.
kudivayisi Qala Monastery kwaqondana ushintsho oluphawulekayo ezaqala ngo ERussia yasendulo emva kwempi Kulikov. Le nkathi yesikhathi kuphawulwa nenkonzo St uSergiyu. Vysotsky Monastery e Serpukhov yasungulwa ngo 1374, lapho, njengoba mlando ukufakaza Prince uVladimir laqala ukwakhela lo emzaneni. Ebiyelwe off-oak yayo izindonga, uVladimir wammisa abe ngumbusi wabo. Khona-ke isikhulu waphendukela IsAm Radonezh ngesicelo abusise kuyenze ibe nhle dolobha isakhiwo ongcwele. USergiyu besahlala lapha Serpukhov.
Ukuze uthole ukwaziswa on nini futhi ubani Vysotsky Monastery yasungulwa ngo Serpukhov, etha ngokuningiliziwe okucashunwe, owabekwa ngaphandle yesonto, ezakhiwe behlonipha St. uSergiyu noSt Afanasiya Afonskogo , futhi yayikhona Ensemble kuze 1967. Umdala ongcwele ukufunda umthandazo, okuyinto namanje ukuphakamisa nsuku zonke lapha phakathi isevisi.
Athanasius futhi waba wesigodlo lokuqala sezindela ongcwele. Yakhe - esithandayo umfundi - esimisiwe uMfundisi. igama layo kusukela sezindela yayiyindawo Yakhiwa lapho. It yasungulwa entabeni enhle okusezingeni eliphezulu, okuyinto edume ngokuthi "okuphezulu."
I wesigodlo lokuqala
Ngisho nangesikhathi senkonzo ngesikhathi Holy Trinity Isigodlo St uSergiyu umfundi courted udumo knigopistsa futhi pundit ubesebenza kanzima ngenxa ukuvuselelwa amasiko ezingokomoya, Rus elahlekile phakathi neminyaka lwesiTatar ekuthunjweni. Ngenxa yalokhu, phansi kobuholi bakhe, futhi Vysotsky Monastery e Serpukhov ayedumile njengoba isikhungo waseByzantium.
Ngo 1374, Nikon Radonezh baba pervopostrizhenikom kule sezindela ongcwele. Ngokuhamba kwesikhathi, Prince uVladimir Andreyevich eyakhelwe Isigodlo lombhishobhi, isonto efudumele, Refectory, lolo ngesikhathi sokuhlwanyelwa kwakungavamile neze.
Omunye isici Vysotsky sezindela babembheka isimo emnceleni: elapha imingcele aseningizimu ubukhulu eMoscow. Up ngokuphelele kwaze kwaba sekhulwini XVII Oka kokuba umngcele uhlukanisa izwe kusukela emaqeleni Russian. Kanye ke wadala sivikele ukuthi evikelwe lezwe imizamo njalo kuphangwa elilimaza yi omakhelwane elinezinkathazo kuya eningizimu.
Vysotsky Monastery e Serpukhov livame ukusetshenziswa njengoba inqaba, ngakho kwaba njalo esongelwa ekubhujisweni.
Ngo-1382 u-khan iGolden zidlamlilo Tokhtamysh lihlasela Russia, wazama simenze ukuba ikhokhe intela futhi. Phakathi nempi, kanye Dmitrov, Rostov nakwamanye amadolobha, lachithwa futhi Serpukhov Vysotsky Monastery futhi ezibhuqiwe.
isimo Polumirnoe-paramilitary lokhu sezindela ongcwele wayenesizathu nethonya ekuphileni kwakhe. Lapha isikhathi eside wanqamuka ukuphila okumatasa kwangaphakathi. Ngokuya bemibuso ngaphandle kulona, ekupheleni xv - ekuqaleni XVI ekhulwini kwakukhona isikhathi lalichumile: esinamandla ktitorskih ukwesekwa unqabile ekufeni Prince Andrew.
Ngenkathi Ivana Groznogo impilo nezomnotho kuleli wezindela zibuyele kokujwayelekile. Eyokuqala yinkosi ukuvakashelwa ezintathu Vysotsky Monastery e Serpukhov. pilgrimage yakhe ephelezelwa iminikelo ocebile hhayi kuphela, kodwa futhi ukuhlinzekwa izinzuzo. Ukuze eminyakeni 50-th we sezindela XVI ekhulwini ku High kwadingeka 4 emathuneni, cishe 90 nasemizaneni ihlathi.
Ayikho ngaphansi pha futhi Boris Godunov. Nokho, isihe seNkosi babekwa eceleni kwendlela phambi usongo ayehlasela nabantu bezinye izizwe. Ikakhulukazi nzima Isigodlo Waphela XVI - ekuqaleni XVII leminyaka. Kwakuphakathi nalesi sikhathi hhayi kuphela Isigodlo, kodwa wonke Serpukhov wesifunda babhujiswa futhi zishiswe.
Lokhu isikhathi Isigodlo waqala ngo-1991, lapho isiGungu Esingcwele seSonto babenqume phezu sokubuyiselwa esiyisibopho ukuphila Izigodlo kuwo. Apreli 10 wedolobha Krutitsy futhi Kolomenskim Yuvenaliem kwatholwa ezakhamuzi zokuqala ezahlala kwesihenqo.
Lesi sakhiwo eyinhloko yesigodlo - kungcono lombhishobhi isonto ubudala, elakhiwa ngo igama Conception of Our Lady. Ekhona futhi manje, ngokuvumelana namasiko ezakhiwo sihlobana isitayela Maphakathi nekhulu XVI.
Leli sonto lakhiwa ngo-ukuma isikwele njalo. chetverik yakhe emibili anemibala wagqoka engaphansi okusezingeni eliphezulu, okuyinto ekhona wokwakha ithempeli base eyandulela wokushiswa phakathi nokuhlaselwa elilandelayo Golden zidlamlilo. Ngu empumalanga altare protrusion eduze. Lokhu Udonga lwangaphakathi lunesithombe sobumba has a Ingaphandle esiyingqayizivele faceted, ehlotshiswe ewumngcingo portholes umqhewu-like. Ezinhlangothini ezintathu emhlabeni lombhishobhi welulela ezimboziwe itshe kompheme ngezindlela ezimbili ohlotsheni dlula igalari. Ezahlukene obujwayelekile nemengamo igalari kusekelwa omkhulu izinsika sikwele.
Ekuqaleni, emnyango Kwahlelwa ngosizo izitebhisi zamatshe. Nokho, ngasekuqaleni kwekhulu XX kuyagcinwa eyodwa kuphela - eningizimu-ntshonalanga olungaphambili lwesonto lombhishobhi. Ingxenye engezansi lombhishobhi yake yasetshenziselwa njengoba ethuneni. Ekupheleni XVII - ekuqaleni eminyaka XVIII kusho Naryshkins kabusha engxenyeni engenhla lombhishobhi, ukushintsha vaults futhi ukwakha uphahla hipped.
Kuze kube sekupheleni kwekhulu XX Vysotsky Monastery e Serpukhov lalibhidlike. Futhi kusukela ngo-1995 kuphela, laqala ukusetshenziswa ukujabulela umsebenzi esigcwele ku lokubuyiselwa. Ngo-September 2001, lomkhosi St Augustine, ebanjwa inqubo yokwahlukaniselwa omkhulu lombhishobhi. Chin iye obenziwa Metropolitan Krutitsy futhi Kolomenskim Yuvenaliem e prisluzhenii ababhishobhi eziningana. Ngakho ubona-ke bonke abeza ukubona Serpukhov.
Vysotsky Monastery - kanjani ukufinyelela
AmaPilgrim Kanye zezihambeli ziyafika lapha ngamabhasi №3, №8 futhi №20, besuka nje endaweni yomphakathi edolobheni sesitimela. Kusukela ukumisa uhambo Cathedral imizuzu ezimbili ukufika eBhethaniya. Ngemoto ukuze Serpukhov ukushayela kuqala Simferopol, sabe Barysau onguthelawayeka. Ezimpambanweni zomgwaqo wokuqala kusukela irobhothi kufanele ajikele kwesokunxele ungene Central, bese kwesokudla - ngesikhathi sokusebenza, bese emgwaqweni Okwesibili eMoscow. Kusukela yona kokuphenduka yokuqala enkulu phezu Big Vysotsky kwindlela amamitha nje anamakhulu mathathu.
Isigodlo liyaziwa yokuthi yilapha "ongashi chalice". Serpukhov ngonyaka uthola zezihambeli ezaziya ukuza lapha ngethemba lokuthi kuyokusiza ukuqeda ukuluthwa utshwala nokubhema, ukuluthwa yizidakamizwa futhi izifo eziningi. Ekuqaleni isithonjana wamiswa ngo lendawo Episcopal esigodlweni, kodwa kamuva elahlekile. Kukhona inguqulo ukuthi, kanye nabanye isithombe ongcwele betshisa osebeni Nara phakathi nezikhathi ezinzima.
Esikhathini 90 ekhulwini elidlule leminyaka, ezimbili amakhophi uhlu izithonjana abangu ngesineke. Omunye wabo manje Episcopal esigodlweni, kanti eyesibili - in Vysotsky madoda. Kusolwa ukuthi bobabili bayalingana, ngoba imifanekiso abekho amakhophi, bonke kubo kwakuyizingane ngokulinganayo.
Vysotsky Monastery e Serpukhov, mayelana nokuvakashela izibuyekezo ibonisa ukuthi - sesimweni esihle, hhayi kuphela kahle ibuyiselwe, kodwa ubukeka ephelele. Yilokho abantu abaningi abakucabangayo izivakashi nezihambi. Isigodlo uhlale umyalelo ephelele. Akukho njalo eziningi abantu, ngakho ungabheka ngokuphepha efana, ecabanga into siqu, uhlale uthule esontweni, uthandaze kuNkulunkulu.
ama-pilgrim Male ungahlala Isigodlo izinsuku ezintathu. Ukuze usuku ngalunye kokuhlala okumelwe ukuba kuhlatshwe ruble 280, futhi kungenzeka ukuthola indawo nje kuphela kodwa futhi ukudla kwasemini kanye dinner. Labo abafuna ukunweba isikhathi sokuhlala kuleli wezindela ongcwele, uzodinga ukufaka isicelo dean bese bethola isibusiso sakhe. Ngemva kwalokho, kufike umjikelezi iyoba nelungu lomsebenzi akuyona imali imihlatshelo, kodwa ubophekile ukuba feasibly umsebenzi esigodlweni sezindela.
Kufanele yini ngiye Bali loNyaka Omusha Izibuyekezo iholide
Amaholide eGreece - esiqhingini amaphupho
"Flatiron Isakhiwo» (Flatiron Isakhiwo). Skyscraper eManhattan: ikheli, incazelo
Njengoba obonwa umuntu ezimbili abami?
Indlela cwilisa skewers kwesokudla?
Itiye "Ingxoxo": umlando, ezihlukahlukene, okunezinhlobonhlobo kanye nokubuyekeza
I-Russian winger Andrei Mikheev
Okuzenzakalelayo Control Theory